Mareykanka iyo Xulufadiisa oo weerar xoogan ku qaaday dalka Siiriya (Daawo Sawirada) – Xeernews24
Mareykanka iyo Xulufadiisa oo weerar xoogan ku qaaday dalka Siiriya (Daawo Sawirada)
14. April 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Dowladaha Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa weerar xoogan oo dhinaca cirka ah waxa ay ku qaadeen dalka Siiriya, waxa ayna weerarkan uga jawaabayeen weerar loo adeegsaday Kiimiko Sun ah ay fulisay Dowladda Siiriya.
Gantaalo xoogan ay rideen Diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa ku dhacay saldhigyo iyo goobo muhiim ah oo kuyaala gudaha Siiriya ayna gacanta ku heyso dowladda.
Uuro iyo qiiq ka baxaya qeybo kamid ah magaalada Dimishiq ayaa la arkayay , waxaana goobaha gantaalada lagu garaacay la sheegay in ay ku jiraan goobo ay dowladda Siiriya gantaalada kiimikada ku sameysato.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa sheegay in dowladda Mareykanka iyo xulufadooda weerar xoogan ku qaadeen dalka Siiriya, waxaana weerarkan sheegay in uu jawaab u yahay weerarkii ka dhacay Deeganaka Douma ee shacabka lagu laayay.
Dhinaca kale af-hayeen u hadashay wasaaradda arimaha dibadda ee Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in weerarkani dhacay iyada oo fursad ay Suuriya nabadi kaga dhalan kartaa soo dhawaatay.
Dowladda Siiriya ayaa la sheegay in hubkii iyo agabkii muhiimka ahaa kala baxday goobaha la bar tilmaameedsaday, waxa ay sidoo kale Ciidamadda Ruushka ka hortageen qaar kamid ah Gantaalada lagu soo riday Siiriya,
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/werar-1.jpg 642 962 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-14 09:39:412018-04-14 09:39:41Mareykanka iyo Xulufadiisa oo weerar xoogan ku qaaday dalka Siiriya (Daawo Sawirada)
Erdugan oo dhexda u galay hirdanka Ruushka iyo Mareykanka, haysatana labo daran... Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galaya Shir Madaxeexdka 29-aad ee Jaamacadda...